Madagascar, nosy tsara tarehy atsinanan'ny kaontinanta afrikanina | Fitsangatsanganana tanteraka
Nosy madagasikara i Madagascar Ranomasimbe Indianina ary miala ny morontsiraka atsimoatsinanan'ny Africa. Tamin'ny alàlan'ny fanjanahantany Portiogey voalohany ary Frantsay taty aoriana, nahavita ny fahaleovantenany tamin'ny 1960. Rehefa mieritreritra azy isika, dia maka sary an-tsaina nosy iray feno toetra feno hafaliana ala baobab ary feno olona sariaka lemur.
Ary be dia be amin'izany rehetra izany, saingy nandia fandripahana ala tanteraka i Madagasikara tato anatin'ny folo taona. Na izany aza, iray amin'ireo manintona azy lehibe ny mitohy valan-javaboary voajanahary izay manakaiky ny firenena iray manontolo ary misy faritra virjiny saika tsy azonao idirana raha tsy misy torolàlana ofisialy. sarobidy tora-pasika ary mitabataba tanàna fenoy ny tolotra madagasikara ho anao. Raha te hahalala azy ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1 Inona no ho hita eto Madagascar
1.1 Anja's Reserve
1.2 Valan-javaboary Tsingy de Bemaraha
1.3 Isalo National Park, fahagagana iray hafa hita eto Madagascar
1.4 Valan-javaboary Andasibé-Mantadia
1.5 Valan-javaboary hafa ho hita eto Madagascar
1.6 Ny nosy Madagascar
1.7 Antananarivo, renivohitr'i Madagascar
2 Inona no fotoana mety hitsidihanao an'i Madagasikara
3 Inona no hohanina eto Madagascar
4 Ahoana no ahatongavana any Madagascar
Inona no ho hita eto Madagascar
Somary lehibe kokoa noho i Espaina, ny tsy fitovian'ny toetra mampiavaka ny ao anatiny sy ny morontsiraka mahafinaritra eo amin'ny morony dia iray amin'ny mampiavaka an'i Madagasikara. Hanomboka amin'ny firesahana aminao ny momba ny zaridainam-pirenena izy ireo ary avy eo momba ny tanànany.
Manodidina ny efatra hektara, io tahiry io dia vokatry ny fandraisana anjaran'ny Malagasy eo an-toerana, izay miandraikitra ny fitantanana azy io amin'ny maharitra. Ny ankamaroan'izy ireo dia nanao izany mba hamonjy ny vahoaka lemur. Raha ny marina, raha te hahita ireo biby ireo ianao, ny iray amin'ireo tandindon'ny firenenaNy tahiry Anja no toerana tsara indrindra, satria manodidina ny efajato.
Valan-javaboary Tsingy de Bemaraha
Any amin'ny Faritra Melaki avy any Madagascar, dia Lova eran-tany. ny tsingys Izy ireo dia faritra karst plateau izay misy lava-bato sy fisaka maro ateraky ny rano anaty.
Noho izany, ny fitsidihanao an'ity valan-javaboary ity dia hahafahanao mahita ny fananganana rock, ny lohasaha ary ny hantsana tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao. Afaka mandalo azy io amin'ny iray ianao via ferrata Na izany aza, maneho fahasarotana kely izy io satria manana faritra marindrano sy mitsivalana, ary koa sehatra mihantona.
Valan-javaboary Tsingy de Bemahara
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Renirano Tsiribihina amin'ny sambo nentim-paharazana. Azonao atao ny manakarama izany ao amin'ny renivohitry ny firenena, Antananarivo, fa ao amin'ny tanànan'ny myandrivazo, izay manomboka ny dia.
Isalo National Park, fahagagana iray hafa hita eto Madagascar
Raha efa nitsidika ny Grand Canyon an'ny Colorado, afaka mahazo hevitra momba izay ho hitanao amin'ity zaridaina ity ianao. Na izany aza, aza antenaina ny lokon'ny mena na ny tsy fisian'ny maitso amin'izany. Etsy ankilany, ho hitanao ireo lohasaha goavambe misy karazana zavamaniry endemika ary, mazava ho azy, miaraka amin'ny lemur.
Tsy ho vitanao (ary tsy hanome torohevitra anao izahay) hitsidika azy irery. Tsy maintsy manakarama a Mpitari-dalana eo an-toerana ao amin'ny tanàna akaiky an'i Ranohira. Ary ny fitsangatsanganana ny valan-javaboary dia mety haharitra ora vitsivitsy ka hatramin'ny andro maromaro.
Any akaikin'ny Antananarivo no misy azy ary matetika ny olona no mitsidika azy. Manana efa ho dimy arivo sy iray hekitara ny ala mando ary miaraka amin'ny voninkazo voninkazo goavambe. Fa ny tena manintona azy dia eo ianao dia afaka mahita ny karazana lemur lehibe indrindra: ilay antsoina hoe indri-indri, izay mety hahatratra hatramin'ny fito-polo santimetatra ny haavony ary XNUMX kilao ny lanjany.
Valan-javaboary hafa ho hita eto Madagascar
Mba tsy hanitarana ny tenanay any amin'ny valan-javaboary sy hahafahanay manome vaovao bebe kokoa momba ny fitsidihanao an'i Madagascar, dia hofintininay ireo habaka voajanahary hafa hitanao eto amin'ny nosy. Ohatra, izy Valan-javaboary Andringitra, miaraka amin'ireo tendrombohitra feno vatolampy tonga lafatra amin'ny fiakarana, ary ilay miaraka amin'i Ranomafana, ilay hany tokana ananan'ny Volotsangana volamena, karazana lemur hafa.
Ny nosy Madagascar
Araka ny fantatrao, ny firenena afrikanina dia nosy lehibe, nefa koa misy kely kokoa izay tokony hitsidihanao. Izany no tranga sakatia, Mitsy o Tanikely, fa ny roa manan-danja indrindra sy mpizahatany kosa dia Nosy Be sy Sainte Marie.
Nosy Be Nosy misy volkano volkano marobe izy io, ary nisy farihy tsara tarehy niforona. Ny ankamaroany dia mibodo ny Fiarovana voajanahary Lokobe izay misy karazana sakamalao sy iray amin'ireo sahona kely indrindra eto an-tany: Stumpffia Pigmaea. Fa ambonin'izany rehetra izany, ity nosy ity dia iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana manan-danja indrindra eto Madagasikara morontsiraka mahafinaritra.
Amin'ny lafiny iray, Sainte Marie izy io koa dia manana faritra feno fasika sy lalan-tongotra tsara tarehy. Fa ny iray amin'ireo manintona azy dia ao an-tanàna lehibe indrindra, Ambodifotatra: dia ny fiangonan'i Santa Maria, ny voalohany naorina teto Madagascar satria nanomboka ny taona 1857.
Antananarivo, renivohitr'i Madagascar
Aorian'ny diantsika mamaky ny zava-mahatalanjona voajanaharin'i Madagascar, dia ho fantatsika izao ny tanàna lehibe. Antananarivo no renivohitra ary eo afovoan'ny firenena no misy azy. Raha hitsidika azy io dia manasa anao izahay handeha miaraka amin'ny mpitari-dalana satria misy faritra mampidi-doza io.
Ao no ahitanao ny lapa mpanjaka rova, izay fanarenana. Ilay taloha dia anisan'ny napetraka nirehitra tamin'ny 1995. Fa mendrika ny anaovanao azy hahalalanao ny tantaran'ny Fanjakan'i Imerina Na, amin'ny fomba hafa, miainga avy any Madagasikara talohan'ny fanjanahantany.
Azonao atao koa ny mahita ny Lapan’Andafiavaratra, fananganana baroque androany nivadika ho Tranombakoka manan-tantara. Ireo tranobe roa ireo dia ao amin'ny faritra taloha eto Antananarivo, izay misy trano hafakely hafa.
Ho an'ny ampahany, ny Independence Avenue Io no làlana lehibe eto an-tanàna ary ho hitanao marobe izy io trano fomba fanjanahantany. Manomboka amin'ny tsara tarehy izany Gara Soroano ary azonao jerena ao koa ny Lapan'ny filoham-pirenena.
Ny mahazatra kokoa dia ny Tsenan'ny Anakely, izay ahafahanao mamontsina ny fiainana andavanandron'ireo mponina eo an-toerana ary mahita ny vokatra isan-karazany, manomboka amin'ny sakafo ka hatramin'ny asa tanana. Farany, afaka mitsidika eto Antananarivo ianao Katedraly, natsangana tamin'ny 1873 ary koa ny Farihy Anasoy, artifisialy ary ao amin'ny nosy afovoany no ahitanao tsangambato ho an'ireo izay maty an'ady. Ity farihy ity dia ao amin'ny faritra tsy azo antoka, ka tokony hanana izany ianao care.
Call Diego Suarez Hatramin'ny tsy ela izay, ity tanàna any amin'ny farany avaratry ny firenena ity dia iray amin'ireo seranana lehibe. Ilay iray ao amin'ity tanàna ity dia miorina eo amin'ny helodrano mahavariana izay mipoitra manokana Mofomamy, nosy kely nomena anarana noho ny itovizany amin'ny tendrombohitra Rio de Janeiro. Fa ambonin'izany rehetra izany, Antsiranana dia miavaka amin'ny cosmopolitanism-ny sy ny lova mahatalanjona an'ny tranobe mpanjanatany frantsay.
Miaraka amin'ny mponina roanjato eo ho eo, io no seranan-tsambo lehibe indrindra amin'ny firenena. Nihalehibe izy nandritra ny fotoana nanjakan'i Radama ITamin'ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, olo-malaza maharikoriko izay nampiasa ny tanàna ho toy ny toerana fiainganana ho an'ireo andevo izay niara-nivarotra taminy. Ankoatry ny tsenan'ny arabe misy azy, toy ny ao amin'ny Bazary Be, tsy dia misy zavatra betsaka hatolotra anao. Satria tsara tarehy ny moron-dranomasina saingy amin'ny ankamaroan'izy ireo dia voarara ny filomanosana noho ny fandotoana sy ny antsantsa.
Manoro hevitra anao mafy izahay hitsidika an'ity tanàna kely ity. Any raha hahita ianao Morontsiraka mahafinaritra aiza no handro sy hanao fanatanjahan-tena toy ny kayak. Fa, ambonin'izany rehetra izany, satria io no toerana ahafahanao mahita ilay mahavariana Avenue an'ny Baobabs. Làlana lava iray alefan'ny hazo maro karazana amin'ity karazana ity, liana be amin'ny endriny sy ny hahavony.
Avenue an'ny Baobabs
Tandremo manokana ny baobab am-pitiavana, santionany roa nifangaro nifangaro. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, manana tsara tarehy izy ireo angano eo an-toerana. Ity dia milaza fa manavaka ny tanora roa avy amin'ny vohitra maro samy hafa izay nifankatia izy ireo ary nangataka ny andriamaniny mba hiaraka mandrakariva.
Inona no fotoana mety hitsidihanao an'i Madagasikara
Na dia manana toetr'andro isan-karazany aza ny firenena Afrikanina noho ny habeny, amin'ny ankapobeny, ny volana mangatsiaka indrindra dia ny Jolay sy Aogositra, ary ny mafana indrindra dia ny volana Janoary, Febroary ary Martsa. Ataovy ao an-tsaina fa ny toerana misy azy eo amin'ny toerana misy azy dia midika fa mizara amin'ny fomba mifanohitra amin'izay ny toerany fa tsy any Espana.
Na izany aza, ny volana mafana kokoa dia mifanindry amin'ny vanim-potoana orana sy rivodoza, noho izany dia tsy liana amin'ny fitsangatsanganana amin'ireo daty ireo ianao. Ny torohevitray dia ny hitsidihanao an'i Madagasikara eo anelanelan'ny Mey sy Oktobra. Ny mari-pana, na dia fotoanan'ny ririnina aza, dia malefaka sy mahafinaritra ary kely ny rotsakorana.
Inona no hohanina eto Madagascar
Ny gastr gastrikan'ny nosy afrika dia manana akora fototra: -BARY. Be dia be no miseho amin'ny sakafo rehetra isan'andro, ao anatin'izany ny sakafo maraina. Toy izany koa, ampiarahana amin'ny saika ny zava-drehetra izy: legioma, hena, trondro ary na voankazo toy ny voanio aza.
Ny marina indrindra ny fahombiazan'ny lovia mahazatra an'ny Malagasy dia ny vary misy zebu. Io bovid io koa no hena lehibe indrindra eto Madagasikara, na dia akoho be aza nohanina. Raha ny marina, raha manolotra anao izy ireo akoho s sy voanio Vary misy akoho sy voanio io. Izy io koa dia tena mahazatra any amin'ny faritra amoron-tsiraka trondro amin'ny saosy voanio. Etsy ankilany ny foza s sy henakisoa Kisoa nendasina nasiana vary.
Etsy ankilany, amalone dia ny aloela misy henan-kisoa; lasopy ron-kena legioma io; ny sesika Izy io dia karazana saosisy mandeha ra izay atolotra, mazava ho azy, miaraka amin'ny vary sy tsaramaso ary ny ravitoto vita amin'ny mangahazo voatoto izy io ary ampiarahina amin'ny hena zebu na henan-kisoa.
Mikasika ny tsindrin-tsakafo, mofo gasy sy mokari Izy io dia karazana pancake vary ary ny koba Mofomamy misy lafarinam-bary, tantely, voanjo ary pistachios. Farany, manana zava-pisotro roa mahazatra ianao. Ranon'ampago Vita amin'ny vary mifikitra amin'ny lapoaly izy io rehefa mahandro azy sy ny rhum arrangeé Rosiana ao amin'ny nosy, izay misy vanila sy tantely.
Ahoana no ahatongavana any Madagascar
Ny seranam-piaramanidina lehibe eto amin'ny firenena dia Antananarivo fa iraisampirenena koa ny an'ny Nosy Be. Avy eo misy seranam-piaramanidina hafa any amin'ny tanàna toa Toamasina, saingy sidina anatiny ihany no misy azy.
Raha vao eto Madagasikara dia tokony hotadidinao fa tsy mora ny dia. Vitsy ny lalana ary tsy marary ny toetrany. Na eo aza izany dia antsoina ny halehiben'ny fitaterana eto amin'ny nosy amin'ny dia lavitra taxi-brousse. Izy io dia karazana van na minibus izay tsy maintsy zaranao amin'ireo mpandeha marobe. Ataovy ao an-tsaina fa lava sy mavesatra ny zotra ka hanana fotoana hihaonana amin'ny vahoaka malagasy tsara ianao.
Misy lalamby koa. Ny mahazatra indrindra dia ilay antsoina hoe Fiaran-dalamby ala, izay manao ny dia avy any amin'ny faritra avo ka hatrany amorontsiraka. Ny fitsangatsanganana dia ataon'ny olona iray efa antitra sy tsy mahazo aina izay maharitra adiny fito mahery amin'ny dia tsy latsaky ny roan-jato kilometatra. Na izany aza, ny zavatra niainana dia tsy hay hadinoina na amin'ny fifandraisana amin'ny mponina tompon-tany na ho an'ny Fijery mahafinaritra Inona no atolotray.
Farany, hifindra ao anatin'ny tanàna lehibe ianao dia manana pousse pousse, izay mitovy amin'ny malaza posy avy any India sy ny firenena aziatika hafa.
Ho famaranana, ny fitsangatsanganana any Madagasikara dia a traikefa tsy hay hadino. Hahita zaridaina mahafinaritra ianao, tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao, hahafantatra tanàna be mponina ianao, hankafy ny gastronomika matsiro ary hanatsoaka tena amin'ny kolontsaina hafa. Na eo aza izany rehetra izany, manoro hevitra anao izahay handray fitandremana momba ny fiarovana anao satria tsy mangina toa ny tokony ho izy ny nosy afrikanina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Madagasikara
Inona no hatao any Marrakech